Amakhamera Worn-Worn: Ukuthuthukisa Ubudlelwano Bezisebenzi Zeziguli Nezempilo Ezibhedlela | Izixazululo ze-OMG
Amakhamera Awe-Worn-Worn: Ukuthuthukisa Ubudlelwano Bezisebenzi Eziguli Nezempilo Ezibhedlela
Amakhamera agqokwe umzimba, njengoba negama lisho, amadivayisi agqokwe emzimbeni ukuqopha imisebenzi yalowo oyisebenzisayo. Lawa makhamera asetshenziswa kakhulu ngabomthetho, njengeminyango yamaphoyisa ukuze asize ekuxazululeni ubugebengu. Kube nokuthuthuka okukhulu ekusebenzeni nasekuthembekeni, futhi kube nokwehla kokusetshenziswa kwamandla ngamaphoyisa. Kubuye kwaba nokuthuthuka okuvela ezakhamuzini, njengoba nesibalo samacala asolwa ngokungelona amaphoyisa nawo esehlile. Ikhamera egqoke umzimba manje seyibhekelwa ukuthi isetshenziswe kwezinye izimboni. njengokunakekelwa kwezempilo. Le mboni ngokwesibonelo inqume ukusebenzisa lobu buchwepheshe ekusizeni abasebenzi babo bezempilo benze imisebenzi yabo kangcono.
E-UK, ezinye izikhungo zokunakekela ezempilo seziqalile ukusebenzisa imishini enjalo. Ngokusho kocwaningo olwenziwe izinyanga ezintathu esibhedlela i-Queen Elizabeth eBirmingham, e-England, kuye kwehla udlame ezibhedlela ngo-28%. Onogada esibhedlela bagqoka amakhamera omzimba we-RS ewuchungechunge. Ngala makhamera, akwazi ukurekhoda zonke izinsongo zokuhlukunyezwa ngamazwi noma isenzo somzimba ngakubo. Bakwazi futhi ukuthwebula noma yiziphi izinsongo noma ukuziphatha okungenangqondo, kanye nokuhlukumeza ngokobuhlanga nangomlomo ngokusebenzisa ukuqoshwa kusuka kumakhamera. Ukwenza isibonelo, kunesimo sesiguli sowesifazane esenqabile ukuphuma emnyangweni wezimo eziphuthumayo wafuna izidakamizwa ezinikezwe abanye futhi wasola abasebenzi ngokuhlukunyezwa ngokocansi. Ikhamera yomzimba kuleli cala ibe usizo lapho iziswa ukuthi iyaqoshwa. Lolu cwaningo ngokubanzi lukhombisa ukuthi ikhamera yomzimba ibilokhu iwusizo emkhakheni wezokunakekelwa kwempilo.
EHillington Hospital NHS Foundation, nayo ese-UK, isikhungo sezempilo samukele ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba. Iziphathimandla zezokuphepha ezigqoka le mishini zinesibopho sokutshela iziguli ukuthi zizoqoshwa uma zenze kabi noma zenze nganoma iyiphi indlela engafanele. Ngenxa yalokhu, kwaba nokuncipha okukhulu kodlame. Amakhamera akwazi ngisho nokuthola amaphutha ekuqashelweni kwe-CCTV ebekwe esibhedlela nxazonke njengoba amakhamera omzimba enethuba lokuqoqa ubufakazi obusondele kakhulu. Amakhamera akwazi ukwazisa nabasebenzi abangagunyaziwe abacela ukungena emnyangweni. Isibhedlela saseCardiff eWales, abezokuphepha bavula amakhamera ikakhulukazi ukuze badambise isimo esinodlame. Iziguli ziyazi ukuthi noma ngabe yikuphi ukurekhodwa okwenziwe phansi kungasetshenziswa ngabo enkantolo, futhi ngenxa yalokho, udlame nokuziphatha okungalungile kwehlile ezibhedlela ezisebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba.
Amakhamera Worn-Worn: Ingabe Kufanele Avunyelwe Ezikhungweni Zokunakekelwa Kwezempilo?
Isibhedlela yindawo lapho ubumfihlo beziguli nezivakashi bubalulekile khona uma kubhekwa izimo zezomthetho nezokulawula ezidinga ukunakekelwa kwezempilo. Kunemithetho eqinile elawula ukusetshenziswa nokukhishwa kwemininingwane yeziguli ezinezidingo ezikhethekile. Eziningi zezindlela zokwelashwa kweziguli ziqala emnyangweni ophuthumayo, okuyindawo edinga ukuphepha okwengeziwe, ngakho-ke kubandakanya abasebenzi abaningi abagqoke amakhamera omzimba. Izingxoxo zezisulu nofakazi nazo zigcinwa ngabomthetho kulo mnyango. Kodwa-ke, labo abagqoke amakhamera kufanele baqaphele abakhetha ukukubamba, ngoba le ndawo kungenzeka ifake iziguli nezisulu ezingabazisa ubumfihlo bazo ezimweni zazo ezibucayi. Abahlinzeki abaningi bezokunakekelwa kwezempilo benze izinqubomgomo nezinqubo ezichaza ukusetshenziswa okwamukelekayo nokufanelekile kwalawa madivayisi okurekhoda. Isibonelo, ukuvunywa ngomlomo noma kwemvume kungacelwa esigulini ngaphambi kokuba isikhulu sezempilo sikurekhode.
Yize inkinga yobumfihlo ingakhathaza, ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kufakazele ukuzuzisa konke lapho kwenziwa ezibhedlela. Njengoba kunezinyathelo ezifanele ezikhona zokubhekana nanoma yiziphi izingqinamba eziphathelene nobumfihlo, la madivayisi ayithuluzi elisebenzayo nelisebenza kahle embonini yezokunakekelwa kwempilo.
Amakhamera Awe-Worn-Worn: Ukuthuthukisa Ubudlelwano Bezisebenzi Eziguli Nezempilo Ezibhedlela igcine ukuguqulwa: Julayi 28th, i-2020 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4155 Ukubuka kwe-3 Namuhla